नेरुडे लघुवित्तः यसपटक बढेन लगानीकर्ताको आर्कषण (समग्र विश्लेषण)
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, २२ भदौ
२०.७९ प्रतिशत लाभांश घोषणा
नाफा १२४ प्रतिशत वृद्धि
९ जेठ २०६४ बाट नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक औपचारिक रुपमा सञ्चालन भएको हो । यो लघुवित्त ३० जिल्लामा ९० वटा शाखासहित सञ्चालनमा छ ।
नेरुडेले ५ वर्षयता वार्षिक औसत २७.९२ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाशमा १ सय २४ प्रतिशतले नाफा बढाएर नेरुडेले १२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । उसको गत आवमा नाफा भएपछि १५ प्रतिशत बोनस र ५.७९ प्रतिशत नगद लाभांशको घोषणा गरेको छ । अघिल्लो पटक पनि नेरुडेले यही दरमा लाभांश दिएको थियो ।
लघुवित्तहरु बढी नाफामुखी भएपछि गत वर्षबाट राष्ट्र बैंकले यिनीहरुलाई बिभिन्न अंकुश लगाएको थियो । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई व्याज सीमा तोकेको भएपनि पछि त्यसमा केही सहजिकरण ग¥यो । हाल लघुवित्तहरुले आफ्नो पुँजी लागतमा प्रशासनिक लागत ३ प्रतिशतसम्म जोडेर त्यसमा थप ६ प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जामा व्याज लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
नेरुडेको हाल कोष लागत १०.५१ प्रतिशत छ । उसले करीब २० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सक्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुले नाफा रकमबाट १ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्न पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार नेरुडेले १२ लाख ६८ हजार कोषमा राख्नु पर्ने भएको हो ।
लघुवित्तहरुले चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने भएमा राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांशको रकममध्ये २५ प्रतिशत पनि कोषमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेरुडेको लाभांश क्षमता २३ प्रतिशत भएपनि यसले २०.७९ प्रतिशत मात्र लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।
नेरुडेको ८० करोड ३६ व्याज आम्दानी भएपनि खुद व्याज आम्दानी ३९ करोड १५ लाख रुपैयाँ छ । उसले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्रोतको रुपमा परिचालन गर्न पाएको छ । यो २२ प्रतिशतले बढी हो । विपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा यी संस्थाले लगानी गर्नुपर्ने कुल कर्जाको ५ प्रतिशतमध्ये ३ प्रतिशत यस्ता लघुवित्त मार्फत लगानी गर्न सक्छन् ।
नेरुडेले समूहका सदस्यहरुबाट समेत बचत संकलन गरिरहेको छ । यस्तो निक्षेप रकम २८ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ९४ करोड पुगेको छ । उसले आफ्नै स्रोत समेत बनाइरहेको देखिन्छ ।
खराब कर्जाको दर १.५१ प्रतिशतमा सिमित पार्न सफल नेरुडेले खराब कर्जाको आधारमा सो कर्जाको ४७ प्रतिशत रकम राखेको छ । उसको प्रतिसेयर आम्दानी ३१.९० प्रतिशत, मूल्य आम्दानी अनुपात १४.७० प्रतिशत र प्रतिसेयर नेटवर्थ २ सय १९ प्रतिशत छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा एक भन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनीहरु भएको संस्थालाई गाभ्ने÷गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने उल्लेख गरेको छ ।
नेरुडेमा भने नेपाल ग्रामीण विकास समाज केन्द्रको २१.९३ प्रतिशत, प्राइम बैंकको १२.७५ प्रतिशतलगायत छ । लघुवित्तको अध्यक्षमा डा. भेषप्रसाद धमला र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुधिर कुमार श्रेष्ठ छन् ।
गत एक वर्षमा नेरुडेको दैनिक औषत १ हजार ९ सय ४२ कित्ता सेयर किनबेच हुदै आएको छ । यो लघुवित्तको कुल जारी सेयरको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । यो दर १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुले सैद्धान्तिक अर्थमा एक व्यक्तिमा रहेको सेयर अर्को व्यक्तिमा नै नपुगेको भन्ने हुन्छ । लघुवित्तहरुको मूल्य उच्च हुनुमा यही कारण मानिदै आएको छ । यस लघुवित्तको हकमा भने अन्य बैंक सरह नै यो अनुपात रहेकोले यसलाई फरक रुपमा हेर्नु सही हुँदैन ।
लाभांश घोषणा भएपनि नेरुडेको सेयर मूल्य बढ्न सकेको छैन । कम्पनीले गत वर्षकै दरमा लाभांश घोषणा गरेकोले पनि आकर्षण कम भएको हुन सक्छ ।
सेयर कारोबार सन्तुलित क्षेत्रमा घटिरहेको छ । १४ दिने आरएसआई सुचकको स्केल ४०.७७ मा आएको छ । तीन दिनअघि मात्रै २१ स्केलमा रहको यो सूचक त्यसकको भोलिपल्टै ४५ मा पुगेको थियो । आरएसआई स्केल ३० भन्दा मुनि भए सेयर अधिक बिक्री क्षेत्रमा, ३० देखि ७० बीचमा भए सन्तुलित क्षेत्रमा र ७० भन्दा माथि भए अधिक खरिद क्षेत्रमा रहेको विश्लेषण गरिन्छ ।
भर्खरै मात्र सिम्पल मुभिङ एभरेज रेखा क्रमओभर भएको छ । २१ दिने रेखाले ७ दिने रेखालाई काटेर माथि लागेको छ । मूल्य वियरिश प्रवृत्तिमा रहेको यसले संकेत गर्छ । पीभट विश्लेषणले भने अब बजार बढ्ने क्रममा नै रहे एक महिनामा ५ सय ६३ मा पहिलो प्रतिरोध र घट्ने क्रममा रहे ४ सय ९३ मा पहिलो टेवा पाउने देखाउँछ ।
नेरुडेको सेयर मूल्य गत सोमवार र मंगलवार बनाएको आकृतिमा पहिलो दिनको कालो मैनवत्तिलाई दोस्रो दिनको सेतो मैनवत्तिको शरीरले ढाकेको छ । यसलाई इन्गल्फिङ भनिन्छ । कालो मैनवत्तिको शरीरलाई सेतो मैनवत्तिको शरीरले ढोकेमा बजार त्यसपछि बुलिश प्रवृत्तिमा जान सक्ने प्रक्षेपण गरिन्छ ।
तर, यसको सूनिश्चितता भने त्यसपछि बन्ने सेतो लामो मैनवत्तिबाट हुन्छ । यस लघुवित्तको मैनवत्ति चित्रमा भने त्यस्तो हुन सकेन । ग्रभस्टोन डोजी, डोजी स्ट्रार आकृति बनेकोले लगानीकर्ताहरु अन्योलमै रहेको यसले संकेत गर्छ । आगामी दिनको कारोबार हेरेर नै निर्णय लिनु सही हुन्छ ।
एनआइसी एसिया बैंकः पाँच वर्षदेखि औषत २५ प्रतिशत लाभांश, सेयर किनबेच कम (समग्र विश्लेषण)
गरिमा विकास बैंकः सेयर मूल्य वाणिज्य बैंक सरह, लगानीको लागि कत्तिको उपयुक्त होला ? (समग्र विश्लेषण)
युनिलिभरः मूल्य र लाभांश सबैभन्दा धेरै, सेयर किन्दा के होला ? (समग्र विश्लेषण)
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २३, २०७६, ००:२०:००
बागमती प्रदेशमा ५० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी
आजबाट सेयर बजार बन्द हुने
नेप्से २ प्रतिशतले घट्दा सेयरमा सर्किट
सल्टिनै नसकेका खतरनाक १० सीमा विवाद